Momba anay - Jiangxi FuluoEr Medical Instruments Co., Ltd.
JiangXi Folohr Medical Instruments Co., Ltd. (Flor Medical raha fehezina) dia naorina tamin'ny taona 2012.JangXi Folohr Medical Instruments Co., Ltd. dia nifantoka tamin'ny R&D, famokarana ary fivarotana fitaovana fitsaboana aretina mitaiza hatramin'ny nananganana azy tamin'ny 2012; Miorina amin'ny toha-pamokarana any Nanchang, nanangana ivon-toerana R&D Nanchang ny orinasa ary nanangana sampana tany Beijing, Shanghai, Chengdu, sns.
Ny orinasa dia manana ny foibeny ao amin'ny faritra fampandrosoana ny toekarena Xiaolan, Tanàna Nanchang. Niasa tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona 2012. Orinasa fitaovana fitsaboana manambatra ny R&D, ny famokarana ary ny varotra. Ny tambajotran-tseraserany dia mandrakotra ny firenena iray manontolo, ary
Ary nanondrana any amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 30 toa an'i Etazonia, Britain, France, Germany, Russia, Japan, ary Korea South.
Ny fahitana tamin'ny fiandohan'ny orinasan'ny orinasa dia ny ho lasa vondrona indostrialy avo lenta miaraka amin'ny fikarohana siantifika sy ny fahaizan'ny fanavaozana. Nanokatra sehatra lehibe maromaro ny vondrona toy ny siramamy amin'ny rà, ny tosidra, ny mari-pana amin'ny vatana ary ny fakan'ny oxygen okraisma. Ny foiben'i Flor dia ao Nanchang. Amin'izao fotoana izao dia nanangana tobim-pikarohana sy fampandrosoana any Nanchang izy, ary namolavola vokatra fitsaboana solontena maromaro.
Ny fiarovana ny fahasalaman'ny fianakavianay dia ny tanjon'ny orinasanay tany am-boalohany, ary ny tombontsoa ho an'ny fiaraha-monina sy ny fanompoana olona no tanjon'ny orinasantsika.
Ny maha-matihanina, ny fitandremana, ny fanavaozana ary ny fanatsarana dia ireo foto-kevitra momba ny serivisy izay narahin'i Flor foana; ny orinasanay dia hanaraka hatrany ny fanavaozana ny teknolojia, hifantoka amin'ny fikarohana sy fampandrosoana ny vokatra, hanamafisana ny fiantohana kalitao ary hanome serivisy avo lenta ho toy ny torolàlana hiarovana ny fahasalaman'ny olombelona.